မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: သည်နှစ်မွေးသည့် ရင်သွေးငယ်တွေ (၁၃၇၅ခုနှစ်)
သည်နှစ်မွေးသည့် ရင်သွေးငယ်တွေ (၁၃၇၅ခုနှစ်)
သည်တစ်နှစ် မြန်မာခုနှစ် ၁၃၇၅ခုနှစ်ကတော့ …. သုံးခုကြွင်း မဟာဘုတ်ဇာတာခွင် နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ်မှာ မွေးဖွားသော ကလေးသူငယ်များ …ရင်သွေးငယ်များအဖို့ ..အောက်ပါနေ့နံ အသီးသီး ဟာ ဆိုင်ရာ မဟာဘုတ်ဇာတာဖွားများ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မွေးဖွားသော ရင်သွေးငယ်များ ရာဇဖွား
တနင်္လာနေ့တွင် မွေးဖွားသော ရင်သွေးငယ်များ အထွန်းဖွား
အင်္ဂါနေ့တွင် မွေးဖွားသော ရင်သွေးငယ်များ ဘင်္ဂဖွား
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မွေးဖွားသော ရင်သွေးငယ်များ ပုတိဖွား
ကြာသာပတေးနေ့တွင် မွေးဖွားသော ရင်သွေးငယ်များ သိုက်ဖွား
သောကြာနေ့တွင် မွေးဖွားသော ရင်သွေးငယ်များ မရဏဖွား
စနေနေ့တွင် မွေးဖွားသော ရင်သွေးငယ်များ အဓိပတိဖွား
မည်သည့်နေ့မှာပဲ ဖွားမြင်သည် ဖြစ်စေကာမူ …မိဘဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရင်သွေးကိုကိုယ် ..ချစ်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားရတာချည်းပါပဲ။ သို့စေကာမူပေါ့လေ…..အချို့သော မမွေးမီကတည်းက ….နေ့ရွေး ..ရက်ရွေး ….အကြံပေးမှု ကို လိုလားကြမယ့် မိဘ တွေအတွက် …..သည်ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုထားခြင်းဖြင့် ..အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ယျေဘုယျအားဖြင့် ….အများစု အမြင်မှာတော့……. အထက်လေးခွင်ဖြစ်တဲ့ အထွန်း၊သိုက်၊ရာဇ၊ အဓိပတိဖွားများကို …အကောင်းမို့ ပိုမိုရွေးခြယ်လိုကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ….တနင်္လာ ၊ ကြာသာပတေး ၊ စနေ နဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့နံများကို ပိုမို ရွေးခြယ် နှစ်ခြိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။
အောက်နံသုံးခုဖြစ်တဲ့ မရဏ ၊ ဘင်္ဂ ၊ ပုတိ ဖွားများဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု ၊ သောကြာ နဲ့ အင်္ဂါ တို့ကတော့…….အများစု ရှောင်ကြတဲ့ နေ့နံနေ့ရက်တွေ ဖြစ်ကြပါမယ်။
သို့သော် ….အမှန်တစ်ကယ် …ဆန်းစစ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်………………..
၁၃၇၅ ခုနှစ် အတွင်း ဖွားမြင်သည့် ရင်သွေးငယ်များ နှင့် ပညာရေးကဏ္ဍ…..
သည်တစ်နှစ် ၁၃၇၅ ခုနှစ် အတွင်း… တနင်္ဂနွေ နေ့မှာ ဖွားမြင်မယ့် ရင်သွေးငယ်များ ဟာ ပညာရေး ဆိုင်ရာ အားသာချက် အရရှိနိုင်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေ့ဖွားများနဲ့မှ မတူအောင် ..ပညာရေးမှာ ကံအားသာချက်တွေ ရရှိနိုင်သော နေ့နံ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းလှပြီဆိုတဲ့ကျောင်း …၊ အသင်အပြကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ ဆရာ သို့မဟုတ် သင်တန်း ၊ အများစု တက်လိုနေသော သင်ကြားရေး ကဏ္ဍများ ကို အလွယ်တစ်ကူ တက်ရောက်သင်ယူခွင့် ရရှိနိုင်သော ကံဇာတာပိုင်ရှင်များလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နာမည်မှာ ..ဗုဒ္ဓဟူးနံ ပညတ်တွေ ၊ ဗျုပ္ပတ်တွေ သာ မပါခဲ့ဘူးဆိုရင် ….သည်ကလေးငယ်တွေဟာ အနာဂတ်မှာ အမှန်တစ်ကယ်ပဲ ပညာရေး အားသာချက်တွေ ကို တစ်ခြားရင်သွေးငယ်တွေ ထက် ပိုမိုရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေ နေ့ဖွား လောက် မဟုတ်သည့်တိုင်အောင် ..စနေ နေ့ဖွား ရင်သွေးငယ်များ နဲ့ ကြာသာပတေးနေ့ဖွား ရင်သွေးငယ်များ ဟာလည်း …. ပညာရေးအားသာချက် ရှိသော နေ့နံများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် မွေးသည့် ရင်သွေးငယ်များထဲမှာ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ဖွား ရင်သွေးငယ်တွေဟာ ပညာရေး ပြတ်တောက်မှု ၊ ရပ်ဆိုင်းရမှု ၊ ရပ်နားပြီးမှ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရမှု စသည်ဖြင့် ကြုံတွေ့ရမယ့် ကံကို အခြေပြု ဖွားမြင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃၇၅ခုနှစ်အတွင်း ဖွားမြင်သည့် ရင်သွေးငယ်များ နှင့် အောင်မြင်ရေး
ဓနဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး …… သုံးသပ်ရမယ် ဆိုရင် …
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွား ရင်သွေးငယ်များ ...
ကြာသာပတေးနေ့ဖွား ရင်သွေးငယ်များ …..
သုံးမျိုးဟာ …… အစဉ်အတိုင်း အင်အားရရှိထားတယ်လို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွား ရင်သွေးငယ် များကတော့ …အားအကောင်းဆုံးလို့ပဲ ယူဆမိပါတယ်။
ဒီနှစ် ၁၃၇၅ခုနှစ်အတွင်း မွေးဖွားမယ့်ရင်သွေးငယ် တွေထဲမှာတော့
သောကြာ နဲ့ …. စနေ နေ့ဖွား ရင်သွေးငယ်လေး တွေဟာ ….အနာဂတ် အကျိုးစီးပွား ရှာဖွေရာမှာ အခွင့်အလမ်း အရရှိနိုင်ကြဆုံးပါပဲ။ အထူးသဖြင့် စနေဟာ အင်အားအပြည့်ရရှိထားပါတယ်။ နာမည်ပေး မှည့်ခေါ်ပုံ …သာ မတိမ်းစောင်းခဲ့ဘူး ဆိုရင် …စနေနေ့ဖွား ရင်သွေးငယ်တွေဟာ ….သူတို့ လိုလားတဲ့ အကျိုးစီးပွားကို သာမန်အနေအထားကနေ …. အလွန်မြင့်မားတဲ့အနေအထားထိ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်သော အတိတ်ကံ ပါလာကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်ကလည်း စနေဟာ …..အကျိုးစီးပွား ရပိုင်ခွင့် အားအကောင်းဆုံးဖြစ်သလို .. သည်တစ်နှစ် မွေးဖွားမယ့် စနေနေ့ဖွား ရင်သွေးငယ်များဟာလည်း …. ယခင်နှစ်ထက် အင်အား ငါးဆ မက အားကောင်းသော အကျိုးစီးပွား ရပိုင်ခွင့် ကံ …နဲ့ ဖွားမြင်လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည် နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ထိပ်တန်းအောင်မြင်သူတွေ ထဲမှာ စနေအဓိပတိဖွား ဇာတာရှင်တွေ အမြောက်အများ ပါဝင်နေကြသလို….သူတို့တစ်တွေ အောင်မြင်ပြီဆိုရင်လည်း တစ်ခြား ဘယ်သူတွေနဲ့မှမတူတဲ့ အကျိုးစီးပွား နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနိုင်လောက်အောင် ..အတိတ်ကံအကျိုးပေးကောင်း ရှိကြပါတယ်။ အမည်မှာ ကြာသာပတေး / သောကြာ ပညတ်တွေ၊ ဗျုပ္ပတ်တွေ ကင်းပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် မှည့်ခေါ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ..သည်ရင်သွေးငယ်တွေဟာ အနာဂတ်အောင်မြင်မှုဆီကို သေချာစွာလှမ်းနိုင်မယ့် ကလေးငယ်လေးတွေလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
၁၃၇၅ခုနှစ်အတွင်း ဖွားမြင်သည့် ရင်သွေးငယ်များ နှင့် အသက်ဇီဝ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
သည်နှစ်မွေးတဲ့ ရင်သွေးငယ်လေးတွေထဲမှာ ဂရုအစိုက်ရဆုံး နေ့နံကို ပြပါ ဆိုရင် အင်္ဂါ သားသမီးလေး တွေကို ပြရပါမယ်။ သည်ကလေးငယ် တွေဟာ ……. မတော်တစ်ဆဖြစ်မှု ကို တစ်သက်လုံး ဂရုစိုက်ရမယ့် …..ဇာတာရှင်တွေ ဆို တာ ..လုံးဝ မှတ်ယူဂရုပြုမိဖို့ လိုပါတယ်။ အမြင့်ကနေ ပြုတ်ကျတယ် …. ၊ ချော်လဲတယ် ၊ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တယ်….စသည်ဖြင့် ကလေးဘ၀ကတည်းက ကြံကြံဖန်ဖန်တွေ ထိမိခိုက်မိ သွေးထွက်သံယိုမကင်း ဖြစ်ရတတ်သော နေ့နံဖွားတွေပါပဲ။ အမြင့်ကနေ ပြုတ်မကျဖူးတဲ့ အင်္ဂါဘင်္ဂဖွား ရယ်လို့ …မရှိသလောက်ရှားတယ်လို့တောင် ဟောဆိုနိုင်တဲ့ အထိ ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာလည်း …သူတို့တွေဟာ …အတက်ရောဂါ ၊ အပြင်းဖျားပြီး သတိလစ်ခြင်း၊ ဘ၀မှာ ခွဲစိတ်ကုသစရာ အခြေအနေများကြုံရတတ်ခြင်း စသဖြင့် ကံအင်အားသင့်ထားကြပါတယ်။ ဒုတိယ အားဖြင့် သောကြာနေ့ဖွား ရင်သွေးငယ်များဟာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အားနဲချက် ရှိမယ့် ရင်သွေးငယ်များပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့် အတွေး နှင့် ရင်သွေးငယ်များ ကံဇာတာ
ဒီနှစ်ထဲမှာ မွေးဖွားမယ့် ရင်သွေးငယ်များထဲမှာ …..ယောကျာ်းလေး ဖွားမြင်မယ် ဆိုရင် …စနေနေ့ ဟာ ကျွန်တော် သဘောအကျ ဆုံး နေ့နံပါပဲ။ ဒုတိယ သဘောအကျဆုံးကတော့ ..တနင်္ဂနွေပါ။
အဲ…မိန်းကလေး ဖွားမြင်မယ် ဆိုရင်တော့ …… ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု နေ့မှာ မွေးဖွားတာကို ဖြစ်နိုင်ရင် ရှောင်ရှား သင့်တယ်လို့ …ယူဆမိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး ..မေတ္တာရေး အားနဲမှု များပြားနိုင် တာကြောင့်ပါပဲ။ ယောကျာ်းလေးတွေထက် ..မိန်းကလေးတွေအဖို့ အိမ်ထောင်ရေး အားနဲမှုဟာ ပိုမို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ယျေဘုယျအားဖြင့် ယူဆနိုင်တာကြောင့်ပါ။ အခြားသော အိမ်ထောင်ရေး / မေတ္တာရေး အားနဲစေနိုင်သော နေ့နံများကတော့ ကြာသာပတေးနဲ့ တနင်္ဂနွေ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေ က ပိုမိုဆိုးအားများ ပါတယ်။
ကဲ…….သည်လောက်ဆိုရင် တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်……ချစ်စွာသော စာဖတ်ပရိသတ်တို့အတွက် ..ပူတူတူး အုဝဲ လေးများ လိုလားရွေးခြယ်ကြရာမှာ …..အထောက်အကူ ဖြစ်စေလိမ့်မယ် လို့ ယူဆမိပါတယ်။
သို့သော် တစ်ချက်မှာလိုတာကတော့………ကိုယ်က အကောင်းဆုံးကို ရွေးတိုင်းလည်း ကျိန်းသေ ရမယ် မမှတ်ပါနဲ့။ ကိုယ်နဲ့ထိုက်မှ လည်း ကိုယ်ရနိုင်ကြောင်း သတိချပ်ပါ။ အကောင်းဆုံး ကို မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နေ့မွေးမွေး ကိုယ့်ရင်သွေးပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့……မွေးနေ့ မွေးနံက အားသာချက် ရှိသည့်တိုင်အောင် နာမည်မှာ အားနဲရင်လည်း ထင်သလောက် အကျိုးမရနိုင်ပါ။ အဲသလိုပါပဲ ….မွေးနေ့ မွေးနံက အားနဲချက်များသည့် တိုင်အောင် ..နာမည်က အားကောင်းရင်လည်း … ဆိုးကျိုးကို ထိမ်းသွားနိုင်ပါတယ် ဆိုတာ………တင်ပြရင်းဖြင့်……………….။
Phone / 01 618 469
Posted by Sayarphone at 11:56 PM Labels: နှစ်စဉ်ဟောကိန်းများ